दलान नेपाल : 'मधेश है तो नेपाल है, नेपाल है तो मधेश है ।'
भिठामोड वजारमा डाकटरको समेत परिचय बनाएका लालको बुझाईमा नेपालको नयां संविद्यानले मधेशीहरुलाई दोस्रो स्तरका नागरिक बनाएका छन । उनी भन्छन, आजको समयमा पनि यस्तो कुराहरु सम्भव हुन्छ त ?
लालले नेपाललाई भारतको सहो्दर भाईको संज्ञा दिदै भने, हामी नेपालको विरुद्धमा हुनै सक्दैनौ । उनका अनुसार नेपाल भारत नाकाहरुमा आन्द्योलन मधेशीहरु धर्नामा बसे पछि भारतीय व्यापारीहरु नेपाल छिर्न सकेका छैन । उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, तपाईल्े याहावाट देखिरुहनु भएको सिमा नाकामा नेपालका मधेशीहरु धर्नामा बसेका छन, के हामीहरुले उनीहरुलाई कुल्चेर गाडी पास गराउछौ त । नेपालका प्रहरी प्रशासनले मधेशीहरु माथी जथाभावी अत्यद्यिक वल प्रयोय गरेको बताए । उनले भने, तपाईलाई थाहा छ, मेरै जेठी दिदी जनकपुरमा बस्छी, आन्द्योलनको क्रममा आज दुई महिना देखि त्याहा कसरी बसीरहेकी होलान ?
लालका अनुसार नेपाल र भारतविचको सम्बन्ध अलौकिक भएको भन्दै केहि सिमित नेताहरुका कारण यसमा समस्या देखिएको भन्दै काठमाडौका केहि शिर्ष नेताहरु चेत भएसंगै समस्या समाधान हुने छन ।
उनले भने, पाकिस्तान हाम्रो आफनो भएर पनि पडोसी बन्न पुगे तर नेपाल त पडोसी भएर पनि हाम्रो सहोदर जस्तो भयो । आज त्याहा त्यत्रो समस्या आईरहदा भारतीयहरु कस्तो अप्ठायारा महसुस गरीरहेको होलान भन्ने सुनाए । उनले सिमा पारीका बिहारीहरु तथा उत्तर प्रदेशका बासिन्दाहरुको आफनै सिमा भएकाले हामी त्यसलाई तोडन चाहदैनन । तर नेपालको सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न आनाकानी गरीरहेको भन्द्यै त्यस प्रति उनी आक्रोशित थिए ।
उनले नेपालमा मधेशीहरु संग भईरहेको व्यहवार प्रति उनी आक्रोशित हुदै भने, हामी चाह्यो भने भिठामोडवाट जले्श्वर गएर झण्डा गार्न नसक्ने होईन, तर हामी चाहन्छौ कि मधेशको समस्या नेपालको आन्तरिक मामला भएको भन्दै त्यसलाई नेपाल सरकार वा त्याहा का शिर्ष नेताहरुले नै सल्टाउन ।
प्रहरीलाई रासन बन्द
भिठामोडका स्थानिय अगुवाले जनाए अनुसार नेपालमा मधेश आन्द्योलनप्रति प्रहरीहरुले अत्यद्यिक वल प्रयोग गरेको भन्दै स्थानिय नेपाली प्रहरी प्रशासनलाई पुर्ववत रुपमा त्याहाका व्यापारीहरुले उपल्ब्ध गराउदै आएका रासनहरु अहिले बन्द्य गरिएका छन । उनी भन्छन, जनकपुर र जलेश्वरमा हाम्रो आफुन्तहरु माथी जथाभावी गोली वर्साउनेलाई हामीले रासन दिदैन भने उनीहरुलाई याहावाट फर्कादिए ।
जनकपुरमा चलू जनकपुर, भरु जनकपुर कार्यक्रममा प्रहरीले गोली चलाउदा तीन जनको मृत्यु भएको थियो भने जलेश्वरमा प्रहरीको गोलीवाट ६ जनाको मृत्यू भएको थियो । लालका अनुसार उक्त घटनाको दुई दिन पछि आफनो पोशाकमै गाडी लिएर स्थानिय नेपाली प्रहरीहरु रासन लिन भिठामोड पुगेका थिए तर स्थानिय व्यवारीहरु तथा अगुवाहरुले ती प्रहरीहरुलाई रासन दिन्न भनेर त्याहावाट धपाएका थिए । त्यसउ पछि अहिले सम्म उनीहरु पोशाक र गाडीमा आएका छैनन । उनी भन्छन, सदा पोशाकमा आम मधेशीहरु जस्तै आउछन, दुई चार किलो लिएर गईरहेको हामी पनि चाल पाएका छैनौ तर केहि नगरिएको छ । सिमा नाकाहरुमा आन्द्योलनकारी मधेशीहरु धर्नामा बस्दा दुवै तर्फका स्थानिय अगुवाहरुले संयोजन नै गरे मधेशीहरुलाई १० किलो सम्मको सामानहरु लान पुर्णरुपमा छुट दिएका छन ।
उनी भन्छन, आशा गरौ चाडौ नेपालको मधेशीहरु उचित अधिकार पाए पश्चात जारी आन्द्योलन साम्य हुने छ । अन्यथा अवस्था नेपालको दुवै पक्षहरुको हाथवाट फुत्कन सक्छ, उनको बुझाई छ ।